ဂျော်ဒန် တောင်ကြားကို အစ္စရေးပိုင်လုပ်မယ့် အစီအစဉ်...
11 ก.ย. 2562 - 23:55 น.
ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် နေတန်ယာဟုက သူ့အစီအစဉ်တွေကို ရုပ်သံကနေ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက် အင်္ဂါနေ့က ကြေညာ
နောက်တော့ ဒီလို တိုက်ခိုက်ခံရတာကို လက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ဂါဇာ ဘက်က ပစ်မှတ် ၁၅ ခုကို လေယာဉ်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ အစ္စရေးဘက်ကပြောပါတယ်။
အနောက်ဘက်ကမ်းရဲ့ စိုက်ပျိုးမြေကောင်းတဲ့ မြေနေရာ လေးပုံတစ်ပုံက ဂျော်ဒန်တောင်ကြားနေရာတွေဖြစ်
အစ္စရေးက ၁၉၆၇ အရှေ့အလယ်ပိုင်း စစ်ပွဲမှာ အနောက်ဘက်ကမ်းဒေသ၊ ဂျေရုဆလင် အရှေ့ပိုင်း၊ ဂါဇာနဲ့ ဆီးရီးယား ဂိုလန်ကုန်းမြင့်ဒေသတွေကို ရယူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတေ ၁၉၈၀ မှာ အရှေ့ ဂျေရုဆလင်နဲ့ ၁၉၈၁ မှာ ဂိုလန် ကုန်းမြင့်ဒေသတွေကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်ခုစလုံးကို ဆယ်စုနှစ်တွေ ချီကြာတာတောင် နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်မပြုပါဘူး။
ဒါကို နိုင်ငံတကာက တရားမဝင်ဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ အစ္စရေးဘက်က ဒါကို သဘောကတော့ ငြင်းပါတယ်။။
อัลบั้มภาพ ဂျော်ဒန် တောင်ကြားကို အစ္စရေးပိုင်လုပ်မယ့် အစီအစဉ် အာရပ်နိုင်ငံတွေ ရှုတ်ချ